သြစီတောသားတွေ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » သြစီတောသားတွေ	18
cherry nwe says: အားပေးဖတ်ယှုမှတ်သားသွားပါတယ်မရောက်ဘူးပေမဲ့ရောက်သွားသလိုပါဘဲရှင်
myanmarcitizen says: ဗဟုသုတရတယ် နောက်လဲဆက်ရေးပါအုန်း။ သစ်ကုလားအုပ်တွေကို ပစ်ဖို့ အမဲလိုက်ထွက်ကြတယ် ဆိုတော့ သစ်ကုလားအုပ် တော်တော်ပေါလို့လားဗျ။ အကောင်ကတော့တော်တော်ကြီးမယ်ထင်တယ်နှော်။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ( Metal Detector လို့ ခေါ်တဲ့ မိုင်းရှာစက် (သို့ ) ရွှေရှာတဲ့စက် )
pooch says: ပျော်ရာမနေ တော်ရာနေဆိုသလိုပေါ့။
ကိုရင်မောင် says: ကိုယ်တွေမရောက်ဘူးတဲ့ဒေသတွေရဲ့
etone says: ကိုဘုန်းကျော်ရေ …
သွပ်ပြားတို့ဆီမှာ .. ကြည့်ချင်လျှင်တောင် … ၀င်ကြေးပေးပြီး ကြည့်ရတဲ့ သားပိုက်ကောင်တို့ သစ်ကုလားအုပ်တို့ကို ….သူတို့က အပြင်မှာ အနီးကပ်မြင်ခွင့်တင်မကဘူး … အမဲတောင် ပစ်ခွင့်ရလိုက်သေး .. ဒါတောင် လူမစားပဲ ခွေးကျွေးဖို့တဲ့ ………… ။ သြစီတောသားတွေ တကယ် ကံကောင်းတာပဲ ……. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3397
အရီးခင်လတ် says: ကဘုန်းကျော် အခုမှ ဘဲ အော်ဇီ အကြောင်း ရေးရေး မြင် မိတယ်။
သန်းထွဋ်ဦး says: အင်းဗျ အဆိုးထဲကတကယ့်ကို အကောင်း ဖြစ်တဲ့ရသတစ်ခုပါဘဲ။ခုလို ပေးဖတ်လို့ 
nigimi77 says: ဘာ့ကြောင့်မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်ကသိမ်းလဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ဟာ သူတို့ တိုင်းပြည်နဲ့ ယှဉ်ရင် အရမ်းကိုနေချင်စရာကောင်းသလို တောထဲမှာလည်း ထမင်းကိုအလွယ်တကူရှာစားလို့ ရလို့ ပါ။ ဆိုလိုချက်က ရေကြည်တဲ့နေရာ မြတ်နုတဲ့နေရာတွေအင်မတန်ပေါပါတယ်။
kai says: ဦးသန့်မြင့်ဦးစာအုပ်အတိုင်း… အသံထပ်လိုက်ရရင်.. မြန်မာပြည်ကို သိမ်းလိုက်တာ.. အင်္ဂလိပ်ရွိုင်ရယ်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပါဘူး..
nigimi77 says: သန်ရာ သန်ရာပဲ တွေးမယ် မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ချစ်တယ် မြတ်နိုးတယ် သံယောဇဉ်ရှိတယ် ဘာညာဘာညာ ပြောပြော ပေါင် ၂ လုံးကြားက အမေဇုံက
တောထဲ ဖားငါး ရိုက်စား ရှာစား ကြိုက်သလို စား မငတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာလည်း သူများ ကားစီးနေချိန် လမ်းလျှောက်ရင်း…..
nigimi77 says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3121
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ခင်ဗျားဂ သဌေးဆိုဒေါ့
etone says: ဂွစာဂဏန်းကြီး ဆဲဗမ်းဆဲဗမ်းရဲ့ …. ကော့မန့်အပေါ် ဘုဂလန့်ကိုဘုန်းကျော်က မှတ်ချက်လေးများ ချီးမြင့်မလားဆိုတာ …. စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ….. ခွိခွိ ….. ။ :D :D
phone_kyaw says: ဒီကောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: သူလည်း ခင်ဗျားလိုဘဲ
ပညာရှိနည်းနဲ့ ကြွားတာပေါ့ဗျာ :D
Was this answer helpful?LikeDislike 1266
Shwe Ei says: အင်းဂလိပ် သိမ်းခြင်းမသိမ်းခြင်းထက် ကဖုန်းကျော်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းလေးက ပိုမိုက်တယ်လို့ပြောပါရစေဗျာ။ မတူတဲ့ ဘ၀တခု (ကိုယ့်နိုင်ငံထက် အဆပေါင်းများစွားချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံအကြောင်း) ကို ဘာမှမဆိုင်တဲ့နေရာကနေ ထိုင်ဖတ်နေရတော့ ၀တ္တုဖတ်နေရသလို ခံစားရတယ်။ Adventure လေးတွေရှိရင်လဲ ရေးတင်ပါအုံးဗျ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9978
မောင်ပေ says: ကျုပ် သိတာကတော့ စည်သူလွင် ဆိုထားတဲ့ မူရင်းသီချင်း
Comments By Postဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - padonmarဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ပုညကြိယာဆယ်ပါး - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစည်တော်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မောင် ပေစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Ma Maမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - အရီးခင်လတ်ခရီးသည်လေးသို့ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - လင်းဇော် ထက်မွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - BMTM Mdy - မဟာရာဇာ အံစာတုံးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobra“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities